Daawo: Guddoomiye Mursal oo shaaciyey inuu Baarlamanku sii shaqeyn doono ilaa… | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Daawo: Guddoomiye Mursal oo shaaciyey inuu Baarlamanku sii shaqeyn doono ilaa…
Daawo: Guddoomiye Mursal oo shaaciyey inuu Baarlamanku sii shaqeyn doono ilaa…
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh ayaa sheegay in Baarlamaanka Federaalka uu sii shaqeyn doono, xitaa haddii uu waqtigiisa dammaado inta laga helayo Baarlamaankii bedeli lahaa.
Isagoo ka hadlayey fadhigii Baarlamaanka ee Maanta ayuu Guddoomiye Mursal sheegay in xilliga heynta Baarlamaanka Federaalka uu ku eg yahay 27-ka bisha soo socoda ee Disember, laakiin haddii xilligaasi Baarlamaanka diyaar ahaan waayo aan la kala tegi doonin ee ay sii shaqeynayaan.
“Ilaa hay’ad tii bedeli lahayd ka imaaneyso Baarlamaankan waa sii shaqeynayaa.. Ilaa qorshaha Doorashada ay dhammeystiraan dowlad Goboleedyada iyo Hay’adaha Federaalka Barlamaanku wuu shaqeynayaa.. Ma jiro Baarlamaan iska kala taga, iyadoo aan shaqada lagala wareegin.” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu dib u dhac soo wajahay jadwalkii Doorashada 2020/2021 oo ay ku heshiiyeen Madaxda dowladda Federaalka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada.